Akhriso: War-saxaafadeedka dhammeystiran ee Golaha Ammaanka ee ku saabsan xaaladda doorashooyinka Soomaaliya – Kalfadhi
Akhriso: War-saxaafadeedka dhammeystiran ee Golaha Ammaanka ee ku saabsan xaaladda doorashooyinka Soomaaliya
April 24, 2021 Hassan Istiila
Xubnaha Golaha Ammaanka ayaa walaac xooggan ka muujiyay sii socoshada is-mari-waaga siyaasadeed iyo khilaafka u dhexeeya madaxda siyaasadda ee Soomaaliya ee ku aaddan hanaanka doorashooyinka.
Xubnaha Golaha Ammaanku ayaa dib u milicsaday horumarka ballaaran ee laga sameeyay Soomaaliya tobankii sano ee la soo dhaafay, oo ay ku jiraan sugidda amniga, dimoqoraadiyadda, dib u hagaajinta siyaasadda iyo horumarinta dhaqaalaha, gaar ahaan deyn cafinta. Waxay ku amaaneen dadka Soomaaliyeed, mas’uuliyiinta Soomaaliyeed, Midowga Afrika, Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) iyo dalalkooda ay ciidammada ka joogaan Soomaaliya, Qaramada Midoobay iyo saaxiibada kale ee Soomaaliya ee caalamka dowrkooda ku aaddan dadaaladaas.
Xubnaha Golaha Ammaanka ayaa carrabka ku adkeeyay in khilaafka taagan ee ku saabsan hanaanka doorashada uusan ahayn kaliya mid baabi’inaya horumarkan lagu gaaray dadaalka badan laakiin sidoo kale wuxuu diiradda ka weecinayaa dhibaatooyinka mugga leh sida fatahaadaha, abaaraha, ayax duureedka, aafada COVID-19, iyo la dagaallanka khatarta Al-Shabaab. Waxay carrabka ku adkeeyeen in is-afgarad laga gaaro arrimaha doorashooyinka ay taageero u noqon doonto isla markaana fududeyn doonto horumarka iyo horumarinta joogtada ah ee Soomaaliya iyo dadkeedaba.
Xubnaha Golaha Ammaanku ayaa hoosta ka xariiqeen in is-afgaradku muhiim u yahay hanaan kasta ee doorasho si looga guul gaaro. Waxay xuseen in heshiiskii 17kii Sebtember uu weli yahay aasaaska kaliya ee ilaa iyo hadda ay ansixiyeen Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dhamaan Dowlad Goboleedyada Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka ah.
Sidaas darteed, Xubnaha Golaha Ammaanku ayaa ugu baaqay dhamaan dhinacyadu inay diidaan cunfiga [rabshadaha] oo ay dib u billaabaan wadahadalka si degdeg ah oo aan shuruud ku xirnayn. Waxay ugu baaqeen madaxda Soomaaliyeed inay aqoonsadaan oo ay ka amba-qaadaan qodobadii badnaa ee horay looga heshiiyay, si ay u xalliyaan khilaafaadkooda harsan oo ay wax walba ka hormariyaan danta dadka Soomaaliyeed, iyadoo laga wada shaqaynayo geeddi-socod doorashooyin oo ay Soomaali leedahay, Soomaalina hogaanka u hayso, lana helo jadwal lagu heshiiyey, sida ugu dhakhsiyaha badan ee suurtagalka ah. Waxay mar kale ku celiyeen inay diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan [arrimahaas] iydoo loo marayo Howlgalka Kaalmeynta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM) oo kaashanaya AMISOM, Midowga Afrika (AU), Midowga Yurub, Urur-Goboleedka IGAD iyo saaxiibada caalamka.
Xubnaha Golaha Ammaanku ayaa sheegay in ay tixgelinayaan wadahadalkii Madaxweyne Farmaajo uu magaalada Kinshasa kula yeeshay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimoqoraadiga ah ee Congo ahna Guddoomiyaha Midowga Afrika, Felix Tshisekedi 19kii Abriil. Waxay taageero u muujiyeen oo ay dhiirigeliyeen dadaallada caalamiga ee gobolku horkacayo ee gacanta looga geysanayo sidii dhinacyada dib loogusoo celin lahaa miiska loona fududayn lahaa wadaxaajoodyo loo dhanyahay.
Senator Zamzam “Haddii ay iskaashadaan dhallinyaradda iyo haweenka wey heli karaan xuquuqda kaga maqan siyaasadda”
Madaxweynaha Somailand oo kulan la qaatay xubnaha Guddida Doorashooyinka Somaliland
June 19, 2021 June 19, 2021 Hassan Istiila
Shir lagu qabtay magaalada Muqdishu oo socday muddo laba maalmool ah 16-17kii Juun 2021, ayaa looga hadlay...